Fotoana Ho An’ny Fiovàna Ao Amin’ny Efitranombaovao · Global Voices teny Malagasy
Fotoana Ho An'ny Fiovàna Ao Amin'ny Efitranombaovao
Voadika ny 16 Jolay 2018 12:08 GMT
Tena fotoanan'ny fiovàna ho an'ny GV ity taona 2018 ity. Teny am-piandohan'ny taona, niala tamin'ny maha-Talen'ny Famoahana lahatsoratra azy i Sahar, ary amin'ity volana ity no handaozan'i Lauren antsika, izay hiasa ao amin'ny Mobilisation Lab.
Matetika mafy ny miaina ny fiovàna, ary tena mafy indrindra ny very olona toa an'i Lauren, izay tena mpikambana nanolo-tena sy nanome aingam-panahy tato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices ary tena teo afovoan'ny asantsika andavanandro ihany koa. Tena halahelo ilay fisiany tony sy mahay isika ao amin'ny ekipa mpitantana.
Fa mandray izany ihany koa izahay ho toy ny fahafahana vaovao hamolavola ny andininy manaraka amin'ny efitranombaovaon'ny GV — ny iray izay mandray an-tanana ny filàntsika amin'izao fotoana izao, ireo fiovàna miseho erantany ary ato anatin'ny sehatra misy antsika, ary izay mamela antsika hametraka ny asantsika hamàka kokoa amin'ny toerana ilàna azy.
Ny drafitra napetrakay voalohany dia ny hanomboka ny dingana fandraisana Talevaovao hisahana ny Famoahana lahagtsoratra amin'ny faran'ny volana Septambra. Noho ny fialàn'i Lauren, tsy maintsy niova hafaingànana kely izahay. Aorian'ny fialàn'i Lauren amin'ny 13 Jolay, hametraka drafitra vonjimaika izay hanome antoka ny fitohizan'ny asantsika andavanandro izahay. Ny 13 Jolay ka hatramin'ny faran'ny volana Septambra, Taisa Sganzerla, izay ankehitriny toniandahatsoratra ho antsika ao amin'ny faritra miteny Portiogey ary mpikambana ao amin'ny rantsan'ny ekipa fanontàna ihany koa, no handray ny ampahan'ny asan'i Lauren izay misy fiantraikany amin'ny asa andavanandron'ny efitranombaovao. Hanohy ny asany amin'ny maha-Tale vonjimaikan'ny fmaoahana lahatsoratra i Georgia, toy ny efa nataony hatramin'ny fiandohan'ny taona.
Tamin'ny faran'ny volana Jona, nametra-pialàna tamin'ny maha-mpanonta ao amin'ny faritr'i Afrika atsimon'i Saharà azy ihany koa i Endalk mba hanomanany ny toerana maha-mpampianatra ao amin'ny Oniversite Hamline ao Minnesota amin'ny volana Septambra. Hisolo azy, farafahakeliny, hatramin'ny faran'ny volana Aogositra i Amanda Lichtenstein, raha toa ka mbola manomana ny hanendry olona vaovao ho mpamoaka lahatsoratra izahay.
Mandritra io fotoana io ny ekipa fototra, miaraka amin'ireo toniandahatsoratra sy ny vondrom-piarahamonina, dia hiasa momba ny famolavolana ny drafitrantsika ho an'ny famerenana vaovao ny efitranombaovaontsika sy ny tanjon'ny famoahana lahatsoratra ary ny laharampahamehana.
Tsy andrinay ny hiaraka hiasa aminareo mikasika ny drafitrantsika ho an'ny Global Voices, ary toy ny mahazatra, vonona ny hiresaka mikasika ity fiovàna ity, ny fijerinay ny hoavy, ary ny hevitrareo ho an'ny tetikasa GV, fifantohana ara-panontàna, ary tantara goavana izahay.